China Deep Groove Ball Muchibereka 6002 vagadziri uye bhizimisi | JITO Kubereka
Yakadzika Groove Bhora Kubereka 6002
Basa hombe rekutakura vhiri hubhi kutakura mutoro uye rinopa nhungamiro chaiyo yekutenderera kwehubhu. Icho chikamu chakakosha kwazvo icho chinogona kutakura zvese iwo mutserendende uye axial mutoro. Iyo yechinyakare inobereka yemota vhiri hub inoumbwa neese maviri seti conical roller inobereka. Kuisirwa, kuzora, kuisa chisimbiso uye kugadzirisa mutambo kwese kunoitwa mumutsetse wekugadzira mota.
Chinhu It. 6002
Kubereka Type Yakadzika paburi bhora inobereka
Zvisimbiso Type: Vhura, ZZ, 2RS
Mashoko Chrome simbi GCr15
Nemazvo P0, P2, P5, P6, P4
Kuchenesa C0, C2, C3, C4, C5
Cage mhando Brass, simbi, nylon, nezvimwewo.
Bhora Kubereka Chinhu Hurefu-hupenyu nemhando yepamusoro
Yakadzika-ruzha nekuomesa kudzora mhando yeJITO inobereka
Yakakwira-mutoro neyemberi yepamusoro-tekinoroji dhizaini
Makwikwi mutengo, uyo unonyanya kukosha
OEM sevhisi yakapihwa, kusangana nevatengi zvinodiwa
Kushanda chigayo chinotenderera mill rolls, crusher, vibrating skrini, yekudhinda michina, kuveza michini, ese marudzi ebhizimusi
Kubereka Package Pallet, yemapuranga kesi, yekutengesa kurongedza kana sevatengi 'chinodiwa
Kavha & Dhirivhari:
Kavha Dhata Yakajairwa kutumira kunze kurongedza kana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Pasuru Type: A.Purasitiki machubhu Kurongedza + Carton + Wooden Pallet
C. Bhokisi rega rega + Bhegi repurasitiki + Carton + Wooden Pallet
Kuwanda (Zvimedu) 1 - 300 > 300
Est. Nguva (mazuva) 2 Kutaurirana
1) Taper Roller Kubereka Nhanganyaya:
Yakadzika groove bhora mabheyari anonyanya kutora radial mutoro pamwe nekutora zvine mwero axial mutoro. Iine coefficient shoma yekukwesana, kukwirira kwekumhanyisa kumhanya, hukuru hukuru huwandu uye yakajeka kusanganiswa kwechimiro; akakodzera tarakita, mota, mota, midhudhudhu, uye mimwe michina yakajairika, senge inoshandiswa zvakanyanya mhando yemabhegi mumishini indasitiri.
Yakadzika paburi bhora ine Catalog
Basic mutoro ratings
Kana zvakawanda, ndapota tinya webhusaiti yedu www.netop.cc
- Pakutanga, tichava nekutaurirana nevatengi vedu pane zvavanoda, ipapo mainjiniya edu achaburitsa yakakwana mhinduro zvichienderana nezvinodiwa nevatengi nemamiriro.
UNHU CHIDZIDZO (Q / C)
- Zvinoenderana neIO zviyero, isu tine nyanzvi Q / C vashandi, chaiyo yekuyedza zviridzwa uye yemukati yekuongorora system, iyo mhando kutonga kunoitwa mune yega maitiro kubva pane zvekugamuchira zvinhu kune zvigadzirwa kurongedza kuona edu mabheyari mhando.
- Kumisikidzwa kwekutakura kurongedza uye nharaunda-yakachengetedzwa kurongedza zvinhu zvinoshandiswa kune edu mabheyari, echinyakare mabhokisi, zvinyorwa, mabhodhi, nezvimwe zvinogona kupihwa zvinoenderana nechikumbiro chevatengi vedu.
- Kazhinji, mabheyaringi edu anozotumirwa kune vatengi nekutakura kwemakungwa nekuda kwekuremerwa kwayo, nendege, kutenderera kunowanikwawo kana vatengi vedu vachida.
- Isu tinopa mabheyaringi edu kuti asununguke kubva mukuremara mune zvekushandisa nekushanda kwemwedzi gumi nemaviri kubva pazuva rekutakura, garandi iyi inovharirwa nekushandisa kusingakurudzirwe, kumisikidzwa zvisina kukodzera kana kukuvara kwemuviri.
Mubvunzo: Ndeipi yako yekutengesa-sevhisi sevhisi uye garandi?
A: Isu tinovimbisa kutakura rinotevera mutoro kana chakaremara chigadzirwa chikawanikwa:
Mwedzi 1.12 garandi kubva pazuva rekutanga rekugamuchira zvinhu;
2.Replacements yaizotumirwa nenhumbi dzeako anotevera odha;
3.Refund yezvinhu zvisina kukwana zvigadzirwa kana vatengi vachida.
Mubvunzo: Unogamuchira ODM & OEM maodhi here?
A: Ehe, isu tinopa ODM & OEM masevhisi kune vatengi vepasirese, isu tinokwanisa kugadzirisa dzimba mumhando dzakasiyana, uye saizi mumhando dzakasiyana, isu tinogadzirawo redunhu bhodhi & kurongedza bhokisi sekuenderana nezvaunoda.
Mubvunzo: Ndeipi MOQ?
A: MOQ ndeye 10pcs yezvigadzirwa zvakaenzana; zvigadzirwa zvakagadzirwa, MOQ inofanirwa kutaurirana zvisati zvaitika. Iko hakuna MOQ yemuenzaniso mirairo.
Mubvunzo: Inguva yakareba sei nguva yekutungamira?
A: Iyo inotungamira nguva yemuenzaniso mirairo mazuva 3-5, kune akawanda maodha mazuva 5-15.
Mubvunzo: Maitiro ekuisa odha?
A: 1. Titumire email iyo modhi, mhando uye huwandu, ruzivo rwevamiriri, nzira yekutumira nemitemo yekubhadhara;
2.Proforma Invoice yakaitwa uye yakatumirwa kwauri;
3.Complete Kubhadhara mushure mekusimbisa iyo PI;
4.Confirm Kubhadhara uye kuronga kugadzirwa.
Pashure: YeMotokari Wheel Hub Shaft Kubereka 40202-EL000
Zvadaro: Cylindrical Roller Kubereka
Kaviri Groove Bhora Kutakura
Groove Bhora mabheyaringi
Grooved Bhora Kupa
V Groove Bhora Kubereka